Farmaajo oo hortagaya Barlamaanka Somalia
Saturday May 01, 2021 - 10:17:51 in Wararka by Editor in Chief
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 8 bil gudahood markii 3-aad hortagaya Golaha Shacabka, isagoo maareen la' marxalada kala guurka ah iyo khilaafka doorashada Soomaaliya.
Bishii Sep 2020 ayuu Madaxweynaha u tagay Golaha Shacabka waxa uuna markaas ka codsaday in dalka ka dhacdo doorasho dadban kadib markii ay qabsoomi weysay doorasho dadweyne oo qorshuhu ahaa. Sidoo kale bishii Feb 2021 ayuu hortagay Golaha shacabka isagoo ka soo tagay shirkii Dhuusamareeb oo socda, waxa uuna Goluhu u sheegay caqabadaha doorashada, isagoo eedeyn dusha uga tuuray Madaxweyne Deni.
Maanta, waa markii 3-aad waxaana la filayaa in uu Golaha Shacabka weydiisto ka laabashada sharcigii gaarka ahaa ee doorashada Soomaaliya, kaas oo ahaa muddo korarsi dadban oo 2 sano ah.
Dad badan ayaa dhowraya khudbada maanta ee Madaxweynaha, taasoo dalka gelin karta xasilooni ama ka sii dari karta xaalada dalka.
[Daawo] guusha Rooble iyo Qatar oo Farmaajo ku qasabtay inuu ka laabto dacwadda badda Somalia
[Daawo] heshiiskii guusha ee garabyada Muqdisho gaareen iyo Fanaan Hawiye ah oo Hargeysa lagu garaacay kadibna Muqdisho looga daba tegay
[Daawo] Ergayga Qatar oo xog yaab leh u sheegay Musharaxiinta iyo Saraakiishii gudigga badbaado Qaran oo guddi magacaabay la shiraa Rooble
[Topnews:-] Farmaajo oo baarlamaanka weydiistay iney Raisulwasare Rooble ku sameeyaan xilka qaadis Sabtiga ?
[Daawo] Raisulwasare Lahelow oo afkii Farmaajo kula hadlay Mucaaradkii la weeraray halkii laga sugaayey raaligelina hanjabay
[Daawo] sidii dagaalka loogu jibiyay Ciidankii Farmaajo iyo guusha shacabka Muqdisho
[Daawo] Midowga Afrika oo Ciidanka AMISOM ku amray ineysan dhaqdhaqaaq sameeyn karin Ciidanka Farmaajo iyo halista iney xiraan oo Maxkamadda Caruusha la geeyo